အိမ် - လုံးချင်းတိုက်သစ်ရောင်းမည် Price in Myanmar | Myanmarkt Marketplace | Myanmarkt
အိမ် classified: လုံးချင်းတိုက်သစ်ရောင်းမည်
#အသင့်နေထိုင်နိုင်သော_လုံးချင်းတိုက်သစ်ရောင်းမည် +++++++++++++++++++++++++++++++ 🏡 တာမွေမြို့နယ်၊ မေတ္တာညွန့်ရပ်ကွက် 🏡 ဂီတအစည်းအရုံးအနီး၊ ဂရန်မြေ။ 🏡 အကျယ်အဝန်း(၅၀ပေ×၆၀ပေ), 2RC. 🏡 2_Master Bedroom, 3_Bedroom. 🏡 ကျွန်းပါကေး၊ Air con, ပြင်ဆင်ပြီး အသင့်နေထိုင်နိုင်သောလုံးချင်းတိုက်။ 💵 စျေးနှုန်း_၇၅၀၀သိန်း(ညှိနှိုင်း) 📲📲📲📲📲 >>>>>>>>>>>> 09-752 7575 47, 09-250 998 522 09-7789 69 226, 09-340 185 131